100% 1500mah JUSTFOG Asaliga All in mid ka mid Xagaa nidaamka 1 starter Kit top buuxinta stock Svapor Daad - Shiinaha DongGuang BEC Technology
100% 1500mah JUSTFOG Asaliga All in mid ka mid Xagaa 1 starter Kit nidaamka top buuxinta stock Svapor Daad
Hannaanka Furitaanka kabineetada
Tube Haanta Exchangeable
Si gaar ah loogu Anti-tufi gariiradda
System Buuxinta Top
JUSTFOG FOG1 Kit yimaado la batari 1500mAh iyo awoodda 2ml. Waa epitome ee ammaanka ay nidaamka furitaanka kabineetada iyo gaashaan ilaalinta anti-tufi. Soo bandhigtay buuxinta top, tube taangiga badeli, iyo muuqaalka bir-dahaarka leh, xirmada this halkan idiin yahay. Waa xirmo ah lagu bilaabo iyo halyeeyada labada. Arrinta aad tahay daruur chaser ama dhadhan chaser a No, xirmada this mar walba la kulmi karto baahidaada.
Fiiro gaar ah: Not available to South Korea,France, Netherlands and Belgium.
Justfog FOG1 Kit Iibinta Point
1. Nidaamka Simple top-buuxintii
2. Easy-to-bedelo tube dareere
3. nidaamka furitaanka kabineetada
4. 100% Japanese gariiradda suuf organic
5. function ilaalinta batari Smart
magaca Kit Justfog FOG1
gariiradda Resistance 0.5Ω / 0.8Ω
Capacity taangiga 2ml
ereeya 24W (0.5Ω), 15W (0.8Ω)
Body Waxyaabaha ahama, tube PC ka Bayer Germany
xukun Type Micro 5 PIN Cable USB
Justfog FOG1 Kit List xirxirida
1 x gariiradda dhululubada ah (0.5Ω)
1 x gariiradda dhululubada ah (0.8Ω)
2 x Inner O-giraanta (madow)
3 x Inner O-giraanta (cad)
Sidee si aad u dalbato,
Previous: 2017 System Furitaanka kabineetada E-cig Kit 100% EU TPD Compliant vapoizer 900mah J-fudud Justfog P16A kit bilowga qiimaha wershed Daad cusub
Next: Daad Justfog e sigaarka Asaliga Justfog Q16 Clearomizer / Atomizer / Haanta